CHINANGWA (kwete) chakabiwa panguva Rink! | Holmbygden.se
Posted on 10 Ndira, 2014 kubudikidza Holmbygden.se
Patinenge tichimirira chando Rink anofanira Chiso chinopenya zvino uppskottad Rink muChechi Bay hwakakwana chando!
Chinangwa zvino kumutsidzirwa! Luckily, hazvina yakabiwa, asi pano neapo akakwereta pasi pehurumende ezvinhu.
Mumwe målburarna pana Anund Manor School anoita kunge zvakabiwa! Izvi nhau chinopunyairireiko yakawanikwa nezuro pakashanya pachikoro. Chete mumwe mumakeji, pamusoro kumusoro, akanga asiya. Hapana pedyo chinoratidza apo vakanyangarika, asi Ungangove ichangopfuura muna December-January.
Pane munhu anoziva chinhu nezvazvo?!
Comment pazasi kana kutirovera runhare!
Sundsvall Municipality haana Kugeza zvakawanda Holm
Mumwe gore akatora Sundsvall Municipality pasina paakaudza mumwe pakarepo akabvisa Rink muna Anundgård. Zviri pachena aida zvikuru kumwewo. Gore rakapera, vakafunga haana Kugeza chero chando, asi pashure kumanikidzwa #ShepherdsHut vakazviita zvakadaro.
Gore rino, iro Municipality vakanga zvakare haana aronga kuronga ice Rink muna Holm zvachose. HBU zvino kamwe zvakare kunyorerana Sundsvall Municipality uye akazivisa kuti tinofunga zviri pasi kuzvidza kuti kunofanira kutema iri nesu. mari Tax kunyange Holm vagari uye mwoyo kuti washungurudzika chero basa sezvisipo kudzokera kumaruwa.
HBU zvino nekambani chingapedza ichi. Mashoko asina arovererwa, asi pfupi, uku zvinoreva kuti Municipality chendangariro kuti kanenge kuti takagadzirira chando. Zvadaro isu tichazvigadzirira kuti vanorichengeta achimhanya. A mhinduro kuti harudikanwi mune dzimwe nzvimbo muna Municipality, asi zviri pachena kuti sokunokosha kuti chete chando yedu Chiso chinopenya. The Rink ichatanga Flushing nekukurumidza!
ngaavongwe Vakawanda nhengo HBU kwakaita kuti zvibvire kuti Rink munguva yechando!
Zvadaro kuwadzana yedu inofanira kushanda kwaanoita kwerunyararo pamusoro Rink, tinofanira kuziva nhengo yedu chikumbiro chedu. Saka, tinogona kuratidza chii zhinji Holmbor zviri seri chikumbiro kuva chando Rink muna Holm. HBU waro vangada kutaura huru mazvita kuna wose achangobva akabatana HBU mberi 2014 uye panguva imwecheteyo kunotibvumira kuva chando Rink gore rino!
Support Rink uye HBU penyu! Dzidza zvakawanda nezvokuva nhengo HBU kwenguva femtiolapp.
(“Join Now” panguva “udza mashoko” ari Muterere.)
Rink dzandaienda zvakare 2014?
HBU urongwa kudzokorora regore rakapera yakakurumbira chiitiko ane ice-dzandaienda yechando ichi. Pamwe vakatevera “bhawa manheru” pamwe trubadur-Mike. Tichadzokera mamwe mashoko pamusoro peizvi. Verenga uone zvakanaka mifananidzo kubva regore rakapera ice-dzandaienda